Seamless Blank Guriga Gudaha - Joornaalka Naqshadeynta
Guriga Gudaha Tani waa guri lagu soo bandhigo qaab nololeedka gaarka ah ee martida loo yahay, kaasoo ah naqshadeeye jaantus iyo guriga ganacsadaha. Nashqadeeyaha wuxuu soo bandhigayaa alaabada dabiiciga ah si uu u muujiyo doorka qofka martida ah wuxuuna ilaaliyaa meelaha banaan inay ku buuxiyaan walxaha xubnaha qoyska. Kushiinku waa udub-dhexaadka guriga, qaas u qaabaysan muuqaal ku wareegsan martida iyo hubinta in waalidku meelkasta ku arki karaan. Guriga waxaa ku qalabeysan sagxad cad oo aan kala joogsi lahayn, rinjiyeyn macdan Talyaani ah, galaas hufan, iyo koollo budo cad ah si loo muujiyo faahfaahinta xarrago ee qalabka.
Magaca mashruuca : Seamless Blank, Magaca naqshadeeyayaasha : Tienyu Wu, Magaca macmiilka : TYarchistudio.
Guriga Gudaha Tienyu Wu Seamless Blank